अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारी, कहिले होला निर्वाचन ? - Everest Dainik - News from Nepal
अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारी, कहिले होला निर्वाचन ?
काठमाडौं, मंसिर २४ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्बाचन भइसकेको छ । संविधानबमोजिम अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न बाँकी छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्बाचन लगत्तै राष्ट्रसभाको निर्बाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिसभा सदस्य निर्बाचन सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन् ।
याे पनि पढ्नुस छाता चिन्ह पाउने सम्भावना छैन: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
संविधानमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुईवटा संसदको व्यवस्था छ । दुईवटा संसदलाइृ संघीय संसद भनिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्बाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन अब्हान गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९३ मा उल्लेख छ ।
निर्बाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्बाचनको नतिजा मंसिर २६ गतेभित्र र समानुपातिकतर्फको नतिजा मंसिर ३० गतेभित्र आइसक्ने जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय खुल्दै
अब पु्स अन्त्यतिर संघीय संसदको बैठक आब्हान गर्नुपर्नेछ । अतः राष्ट्रियसभाको निर्वाचन त्यसअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । -नागरिक दैनिकबाट